Hetsi-Panoherana Voromby Ao Frantsa Sy Angletera Manamarika Indray Ny Tsy Fankatoavana Noho Ny Toetrandro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Marsa 2016 10:16 GMT
Eny amin'ny fitsarana ny ‘Heathrow13′ noho ny fibodoana ny lalambe fitodiana avaratr'i Heathrow tamin'ny jolay lasa teo. Saripika: Plane Stupid
Ity lahatsoratra ity dia niainga avy amin'ny sombin-dahatsoratr'i Melanie Mattauch ho an'ny 350.org, fikambanana iray manangana hetsika ara-toetrandro, ary navoaka eto amin'ny Global Voices indray noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Tamin'ny 24 Febroary lasa teo dia noheverina ho alefa am-ponja ny olona miisa 13 nanao barazy tamin'ny fanitarana ny lalambe fitodian'ny fiaramanidina amin'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena ao Heathrow, London, saingy sazy mihantona enina herinandro ihany no azon-dry zareo tamin'ny farany. Efa nanomana ny valiziny sy nametrapetraka ny hafatra imailaka ho ‘tsy ao amin'ny birao’ ry zareo ho fiomanana amin'ny mety ho mpikatroka voalohany momba ny toetrandro hahazo sazy higadra.
Raha ny momba ny lazaina ho raharaha Heathrow 13, dia toy izao ny zava-nitranga: Tamin'ny jolay tamin'ny herintaona dia nametraka ny hanitarana an'i Heathrow ny vaomiera iray najoron'ny governemanta britanika. Roa herinandro taty aoriana, nisy olona 13 avy amin'ny tambajotran'hetsika mivantana Plane Stupid nibahana tamim-pilaminana ny lalambe fisidinan'ny voromby iray tao Heathrow ho fanoherana ny fanitarana ny indostrian'ny fiaramanidina noho ny fandraisana anjaran'izy io amin'ny fandotoana ny rivotra sy ny fikorontanan'ny toetrandro. Naharitra enina ora ny fibodoan'izy ireo ary nanemorana na nanafoanana zotram-piaramanidina am-polony.
Anisan'ny nandray anjara tao anatin'ny vondrona i Danielle Paffard, dokotera atmôsferika 68 taona sady mpanentana ho amin'ny fialana amin'ny fampiasam-bola ao amin'ny 350.org Fanjakana Mitambatra. Teo amin'ny fitsarana ry zareo nandresy lahatra fa mahatsapa ho manana andraikitra ara-maoraly ry zareo hanao hetsika amin'ny maha-olompirenena rehefa tsy nahomby tamin'ny famahana ny olana apetraky ny indostrian'ny fiaramanidina amin'ny fikorontanan'ny toetrandro sy ny fahasalamam-bahoaka ny paika ara-demokratika, ny paika eny amin'ny antenimiera ary ny paika ara-politika.
Nanambara toy izao i Melanie Strickland, 32 taona, mpikambana ao amin'ny Heathrow 13, ary miasa ao amin'ny fikambanana mpanao asa-soa ara-pahasalamana ao London:
Rehefa lò ny rafitra ara-politika ka tsy manao na inona na inona manoloana ny resaka goavana manerantany, toy ny fikorontanan'ny toetrandro, dia manana andraikitra ny olompirenena tsirairay hihetsika. Misy ny andraikitra fototra amin'ny mahaolombelona, ara-maoraly ary ara-piarahamonina tsy maintsy atao isorohana ny ity voina ity sy hanairana ny olona.
Miteraka ny 2-5% fandotoan-drivotra ankapobeny manerantany ny fifamoivoizana an'habakabaka, fa mety hampitsambikina azy ho any amin'ny 22% alohan'ny taona 2050 ny fivelaran'ny indostrian'ny voromby haingana dia haingana, hoy ny vokatry ny fanadihadian'ny Parlemanta Eoropeana. Io no iray amin'ny mpiteraka fandotoan-drivotra haingana dia haingana indrindra, nefa dia mbola tsy terena hampihena ny fandotoan-drivotra aterany sady misitraka fampihenan-ketra koa fanampin'izany mba hahatonga ny saran-dalana ho ambany dia ambany tsy araka ny tokony ho izy.
Nisy fizaran-dahatsoratra momba ny famoahan'eton'ny fiaramanidina sy ny sambo mbola amin'ny endrika drafitra nivoaka tamin'ny avy amin'ny Zaikaben'ny Firenena Mikambana momba ny Toetrandro tao Paris tamin'ny Desambra 2015 noesorina tamin'ny lahatsoratra navoaka farany, ary malefaka loatra ny lalàna vaovao napetraky ny Fikambanana iraisampirenena misahana ny fiaramanidina sivily avy amin'ny Firenena Mikambana hampisy fiantraikany goavana na misy dikany manoloana ny fandotoan-drivotra. Ankilan'ny fikorontanan'ny toetrandro aterany, amin'ny taona 2030 dia mety hiteraka fahafatesan-jaza 150 isan-taona aloha loatra ny setroka avoakan'ny fametrahana lalam-pitodiana fahateo ao Heathrow, araka ny fanombanan'ny MIT.
Na dia manaiky aza ny mpitsara fa “olona manana fotokevitra sy manam-pikirizana” ny Heathrow 13 ary nanitsakitsaka ny fepetran'ny famoahan-tsetroka napetraky ny Vondrona Eoropeana ny Heathrow, dia hitany ho “mihoam-pefy tafahoatra” ry zareo ary nampitandrina fa mety higadra avy hatrany ry zareo raha vao miverina any amin'ny fitsarana.
Ny fihoaram-pefy tafahoatra dia heloka bevava nampidirina tamin'ny fotoana nitondran'ny governemantan'i Margaret Thatcher (1979-1990) ary nokendrena hampihenana ny fhetsiketseham-panoherana. Tamin'ny 2013, ny manampahaizana manokana iray tao amin'ny Firenena Mikambana dia nandrisika ny ijeren'ny Fanjakana Britanika indray ny lalàna momba ny filaminam-bahoaka, indrindra fa “mampanahy dia mampanahy tokoa ny fampiasana ny fihoaram-pefy tafahoatra amelezana ny olona manao fihetsiketsehana ara-drariny”. manampahaizana iray momba ny lalàna ady heloka bevava namariparitra ny mety amoahana didy famonjana ho “hahatalanjona dia hahatalanjona tokoa”. Tsy mbola niatrika fitsarana ny 10 amin'ny vondron'ny Heathrow 13 hatramin'izay.
Ny ‘Heathrow 13′ ivelan'ny Lapan'ny Fitsarana ao Willesden. Saripika: Plane Stupid
Mandritra izany fotoana izany ao Frantsa…
Misy hetsika manohitra ny sidina an'habakabaka hafa ihany koa mihamahazo vahana ao Eoropa. Ao Frantsa, mihahenjana ny fifanandrinana maharitra 40 taona eo andalam-pifanarahana ao Paris amin'ny drafitra hananganana ny seranam-piaramanidina eoropeana goavana indrindra ao Notre-Dame-des-Landes (NDDL), tokony ho 25 kilometatra miala an'i Nantes. Misy fanangona-tsonia iray manindry fa tsy mifanaraka amin'ny CPO21 momba ny toetrandro notanterahina tao Paris ity seranam-piaramanidina ity ka nandrisika ny governemanta frantsay hiditra an-tsehatra nahangona sonia mihoatra ny 11000 tao anatin'ny 24 ora monja.
Lasa tolona malaza indrindra eo amin'ny tolona frantsay ara-toetrandro sy ara-drariny ara-piarahamonina ity fifanenjanana amin'ny fanorenana ny seranam-piaramanidin'ny Notre-Dame-des-Landes ity. Maro no mahita ity tetikasan-tseranam-piaramanidina ity ho endriky ny fampivoarana tsy dia ilaina loatra fa natao ho amin'ny tombontsoan'olombitsy nefa manimba ny fiarahamonina ifotony, ny fiainan'ny tantsaha, ny tontolo iainana ary ny toetrandro.
Anjatony ny olona nibodo ny toerana tao anatin'ny taona maro. Vao haingana teo nisy fianakavian'ny tantsaha 11 nanambara fa hijoro ry zareo hanohitra ny didy fandroahana amin'ny tany ary mivonona ny higadra. Roa alina ny isan'ny olona nanao barazy tamin'ny lalana fihodinana an'i Nantes tamin'ny janoary ho fanoherana ity tetikasa ity. Misy hetsika hafa nomanina tamin'ny 27 Febroary.